ကမ္ဘာသိ ကိုရီးယား ရက်ပ်ပါဆိုက်ကို တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ပီအက်စ်ဝိုင်
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 22 November 2012	တောင်ကိုရီးယား အဆိုတော်တွေဟာ အဆိုတော်မှန်ရင် ရုပ်ချောရမယ်၊ ချစ်စဖွယ်မျက်နှာနဲ့ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် ခန္ဓာကိုယ်ရှိရမယ်။ ငယ်ရွယ်ရမယ်။ ဒီလိုအချက်အလက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံမှ အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ပရိသတ်က လူသိများကြမယ်။ Read more...	ညီမအပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေက စိုးမြတ်သူဇာနဲ့ အိန္ဒြာကျော်ဇင်ပါပဲ လို့ပြောတဲ့ ခိုင်သဇင်ယုဝါ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 21 November 2012	Q. ဒီလောကထဲမှာ နေရာရဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တခြားမင်းသမီးငယ် တချို့နဲ့ ပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက် ညီမ ဘာလုပ်မှာပါလဲ။ A. အတုယူစရာ၊ လေ့လာစရာတွေ အများကြီး ရှိသေးပါတယ်။ သူများကို လိုက်ပြီး ပြိုင်ဖို့အတွက် စိတ်ကူးမရှိဘူး။ ကိုယ်တတ်နိုင်တာလေး၊ ကြိုးစားသလောက် ဖြစ်တာလေးကိုပဲ သမီးလိုချင်တယ်။ ပြိုင်ဆိုင်ပြီးမှ ရတဲ့ ရလဒ်မျိုးကိုတော့ မလိုချင်ဘူး။ ကိုယ်လျှောက်လှမ်းခဲ့တဲ့ လမ်းတစ်ခုကို တည့်တည့်မတ်မတ် လျှောက်လို့ရလာတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုကို ဂုဏ်ယူမိမှာပါ။ Read more...	'ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ဇာတ်မျိုးထက် ဘ၀ဆန်တဲ့ ဇာတ်ရုပ်မျိုးကို သရုပ်ဆောင်ရတာကိုပဲ ပိုပြီးသဘောကျတယ်' ၊ သရုပ်ဆောင်နေမင်းနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 09 July 2012	ရွှေစင်ဦးထုတ်လုပ်ရေး၏ တိုက်ပိုင်မင်းသား တစ်ဦးအဖြစ် ဇာတ်ကားများ ဆက်တိုက် ရိုက်ကူးလာခဲ့ရာမှ ပရိသတ် အသိအမှတ်ပြုမှု အတိုင်းအတာ တစ်ခုကို ရရှိလာသူဖြစ်သည်။ ဆက်တိုက်ထွက်ရှိလာသည့် ၎င်း၏ဇာတ်ကားများဖြစ်သည့် ‘မင်းဒင်ရဲ့သစ္စာ’၊ ‘ယောက်ျားမာယာ’၊ ‘မျောလွင့်နေတဲ့တိမ်’ စသည့်ဇာတ်ကားများဖြင့် သဘာဝကျသည့် သရုပ်ဆောင်တစ်ဦးအဖြစ် ပရိသတ်အားပေးမှု ရရှိလာသူ သရုပ်ဆောင်နေမင်းနှင့် တွေ့ဆုံဖြစ်သည့်အခိုက် လူငယ်တစ်ယောက်၏ အနုပညာအပေါ်သဘောထား၊ ဇာတ်ရုပ် ရွေးချယ်မှု၊ အသစ်အသစ်သော ဖန်တီးမှုများကို မေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ရာ .. . .
Read more...	အနုပညာ အလုပ်သာ မလုပ်ဖြစ်ရင် ဒီအချိန်မှာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်နေပြီဆိုတဲ့ ကောင်းခန့်
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 20 May 2012	ပရိသတ်ရှေ့မှောက်ကို ဇာတ်ကားတွေ တစ်ခွေပြီးတစ်ခွေထွက်ရှိလာနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ကတော့ ကောင်းခန့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်ရဲ့ ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ခံရတဲ့အပြင် ပရိသတ်နဲ့ အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင် ကြိုးစားနေတဲ့ ကောင်းခန့်က…..
Read more...	သိတတ်တဲ့ အရွယ်ကစပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင် ဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ Nကိုင်ရာ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 17 May 2012	သီချင်းအေးအေးလေးတွေနဲ့ ခံစားတတ်တဲ့သူတိုင်း ကြိုက်နှစ်သက်ရတဲ့ အလွမ်းသီချင်းလေးတွေ အတွေးအခေါ် သီချင်းလေးတွေကို အသံဝဲဝဲနဲ့ သီဆိုတတ်သူ၊ သူမကတော့ ကချင်တိုင်းရင်းသူမလေး Nကိုင်ရာပါပဲ။
Read more...	အောင်မြင်တယ်၊ မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာထက် ကိုယ်ရူးသွပ်တဲ့ ဂီတအလုပ်တွေကို လုပ်ခွင့်ရတာကိုပဲ ပျော်ရွှင်နေမိတာပါလို့ ပြောတဲ့ Bobby Soxer
ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ သရုပ်ဆောင်ဆိုတာလုပ်ဖို့ စိတ်ထဲမှာ လုံးဝမရှိထားဘူး အဆိုတော်ပဲ လုပ်ချင်ခဲ့တာ နဒီဝင့်နိုင် လေယာဉ်မယ်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာ မဖြစ်ခဲ့လို့ ဒီအလုပ်လုပ်နေတာ ခရစ္စတီးနား	ဒေါက်တာချစ်သုဝေပါလို့ မိတ်ဆက်ပေးခြင်းခံရတာကို မညာတမ်းဝန်ခံရရင် အနည်းငယ် ဂုဏ်ယူ ကျေနပ်မိသည်ပေါ့ ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား သွေးသစ္စာ Start Prev 1234567 8910 Next End Page5of 79